Nhau - Yakakwira simba nehungwaru ndiyo kiyi yekuputsa murwi wekuchaja
Simba rakakwirira uye njere ndiyo kiyi yekutyora murwi wekuchaja
Mazuva ano, magetsi emagetsi matsva ave sarudzo yevanowedzera vatengi. Nekudaro, zvakakosha kuti uzive kuti seyakakosha nzvimbo dzekutsigira dzemagetsi nyowani magetsi, kuchaja mirwi kutarisana nenguva refu yekuchaja, kukwana kukwana kuchaja sevhisi yebasa, uye yakaderera nhanho yehungwaru. Zvinogona kutaurwa kuti kuchaja mirwi ndicho chinhu chikuru chinotadzisa kukura kukuru kwemotokari dzemagetsi nyowani.
Naizvozvo, maitiro ekugadzirisa dambudziko rekuchaja rave iro rinonyanya kukoshesa indasitiri yese. Vamwe vari mukati vanotenda kuti yakakwira-simba kuchaja tekinoroji ndiyo kiyi yekutyora murwi wekuchaja mune ramangwana. Panyaya iyi, makambani ekunze ane zvakatangira. Swiss ABB yatangisa iyo Terra High Power DC inokurumidza kuchaja murwi, iyo inogona kuburitsa 350 KW, ingangoita katatu iyo yeTesla super kuchaja murwi. Uye zvakare, iyo yekutanga Ultra-inokurumidza kuchaja chiteshi cheEuropean Fast Charge Alliance Ionity yakaitwawo. Iyo murwi wekuchaja unobhadhariswa neiyo yakasanganiswa yekuchaja system, uye iyo yekuchaja simba iri kusvika ku33 KW, iyo inogona kunyatso chengetedza iyo yekuchaja nguva.
ABBTerra Yakakwira Simba Simba DC Inokurumidza Kubhadharisa Pile
MuChina, ndeipi nhanho yepamusoro-simba yekuchaja tekinoroji yakagadziriswa? Ndeapi majaira ekugadzirisa aripo? Enda kune chiratidziro ichi uye iwe uchazoziva! PaJune 15-17, iyo 11th Shenzhen International Charging Station (Pile) technical Equipment Exhibition ichaitirwa kuShenzhen Convention uye Exhibition Center. Youyou Green Energy, Yingke Rui, Yingfeiyuan, Koshida, Polar Charger, Orange Angangoita makambani mazana maviri, akadai seMagetsi Nyowani Nyowani uye Shenzhen Jiangji, icharatidza mhinduro dzakasiyana siyana dzekuchaja zviteshi zvebhazi uye matekinoroji matsva uye zvigadzirwa zvekuchaja-simba guru.
Pakati pemakambani mazhinji ari kutora chikamu pakuratidzira, ndezvipi zvigadzirwa zvitsva zvichaunzwa naShenzhen Youyou Green Energy Electric Co, Ltd. (inonzi "Youyou Green Energy")? Zvinonzwisisika kuti Youyou Green inoratidzira matatu akateedzana e Ultra-yakafara voltage renji inogara simba kuchaja module akateedzana, State Grid inogara simba rekuchaja module akateedzana uye 30KW yakakwidziridzwa E akateedzana module.
Youyou Green inogona kuve inotungamira mhando muchaji module indasitiri. MunaJune 2017, Youyou Green ndiye wekutanga kugadzira yakakwira-simba kuwanda 30KW yekuchaja module. Mushure megore rimwe rekugadzira hunyanzvi, Youyou Green yatanga yazvino Ultra-yakafara voltage renji inogara simba module module. Pakati pavo, iyo 30KW Ultra-yakafara voltage renji inogara simba module module UR100030-SW kuita kwakakurumbira. Iyo UR100030-SW inogonesa kuburitsa voltage renji ye200-1000V, uye inogona kuburitsa 1000V / 30A pahigh voltage uye 300V / 100A pazasi voltage, ichiwana 30KW inogara simba kuburitsa pamusoro penzvimbo yakakura voltage renji. Iyo murwi wekuchaja wakaitwa nemodule unogona kuburitsa yakakura yekuchaja yazvino pasi peiyo voltage mamiriro, zvakanyanya kupfupisa iyo yekuchaja nguva, kuvandudza mashandiro ekushanda uye kudzikisa mashandiro emutengo.
Parizvino, Youyou Green ane yakanyanya nzwisisika chigadzirwa akateedzana mumunda wekuchaja murwi simba ma module, kusanganisira: 30KW akateedzana, 20KW akateedzana, 15KW akateedzana, yenyika grid inogara simba nhevedzano uye Ultra-yakafara voltage renji inogara magetsi akateedzana. Nesimba tekinoroji yekutsvagisa uye simba rekuvandudza, rakanakisa chigadzirwa mhando, yakarongeka manejimendi modhi uye yakazvimirira yekutsvaga uye kusimudzira hunyanzvi zvakanakira, kambani yave ichizivikanwa zvakanyanya nevatengi Iko kuvimbika kwakakwira kweYouou Green Energy module zvigadzirwa zvinozivikanwa, izvo zvinoparadzaniswa nemweya wayo wakasarudzika uye kutsvaga kwekupedzisira.
Pamusoro pekuchaja-kwesimba-simba, njere zvakare ndiyo kiyi yekutyora murwi wekuchaja. Parizvino, maguta mazhinji ari kuvaka matutu ekuchaja akangwara. Iyi mirwi yekuchaja inosanganisa kuchaja, kutonga, kutaurirana kwegore uye kubhadharisa mabasa. Mushure mekunge mushandisi apinda muchaji system, inogona kubhadhariswa nekutsvaira kana kuongorora kodhi kuti itore simba. Kana kuchaja kwapera, simba rinobva radzimwa kudzivirira moto unokonzerwa nekuwedzeredza. Kubhadhara neWeChat kana Alipay scan kodhi, hapana chikonzero chekuchinjana mari zvachose.
Dzimwe nyanzvi dzeindasitiri dzinotenda kuti ikozvino iko kuvandudzwa kwemisha yekuchaja mirwi haina kugadzikana, yakakwira-simba kuchaja, isina waya kuchaja ndiyo huru yekuvandudza nzira yeindasitiri.